Ise Top Tips For Building A Thought Leadership Ọdịnaya Strategy | Martech Zone
Ọrịa na-efe efe Covid-19 egosila na ọ dị mfe iwu - na ibibi - akara. N'ezie, ọdịdị nke otu ụdị ụdị nkwukọrịta si agbanwe agbanwe. Mmetụta abụwo mgbe mgbe isi ihe na-eme mkpebi, mana ọ bụ otú ụdị jikọtara ndị na-ege ha ntị nke ga-ekpebi ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda na post-Covid ụwa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị na-eme mkpebi na-ekwu na otu nzukọ otu echiche nke ndu na-enye aka na agwa azụrụ ha, n'agbanyeghị 74% nke ụlọ ọrụ anaghị eche usoro nduzi n’ọnọdụ.
Edelman, 2020 B2B chere Nduzi Mmetụta Ọchịchị
Na blọọgụ a, m ga-enyocha atụmatụ ise kachasị elu iji wulite atụmatụ iduzi echiche mmeri:
Tip 1: Gbado anya na ihe ndi choro choro n ’ulo oru gi
Ọ nwere ike ịdị ka ajụjụ bụ isi mana echiche ndu bụ maka igosipụta nka ụlọ ọrụ gị, karịa ịkwalite ndị mmadụ. Iji mee nke ahụ n'ụzọ dị irè, ị ghaghị ịchọpụta nsogbu ndị na-ege gị ntị ga-eche ihu n'ihu afọ atọ, anọ, na ise n'ihu. Usoro iduzi echiche dabere na nyocha nyocha na ọnụ ọgụgụ, na-enye nghọta dị omimi banyere ahịa a, ga-ahụ na emeghị nkwukọrịta na whim, ma ahaziri maka ndị na-ege gị ntị site na iji usoro data eme ka ịkọ akụkọ.
NDipMỌD 2 XNUMX: Nwee ọhụụ doro anya maka ebe ndị ndu ga-emetụta na ahịa ọrụ
Karịsịa na gburugburu B2B, ịzụrụ ihe nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma sie ike. Idu ndú n'echiche nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa n'igosi ihe kpatara ị kachasị mma maka ọrụ ahụ. Nke a doro anya na ọ bụ nlezianya siri ike n'ihi na - n'adịghị ka ahịa ọdịnaya - chere na onye ndu enweghị ike ịkwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọfụma. Nchọpụta ụlọ ọrụ na-enweta obi na uche, na -emepụta atụmatụ bara uru dabere na ihe ndị kachasị mkpa ndị na-ege gị ntị.
Tip 3: Mụta Ihe Na-eme Ka Most Ghara Nkwenye
Ọ na-ewe oge iji nweta ntụkwasị obi, ọkachasị n'ahịa juputara. Dika nkwukọrịta dijitalụ bụ naanị ụzọ iji ruo ndị mmadụ ntị n’oge ọrịa a na-efe efe, ndị mmadụ ejupụtala na ọdịnaya, na-eduga n’adịghị ike ọgwụgwụ. Anyị na-agba gị ume ile anya isonyere ndị agha na ndị nrụ ọrụ ụlọ ọrụ dịka ndị ahịa, ndị ahịa, na ndị mmekọ iji nwee echiche jikọrọ ọnụ na iduzi echiche. Nke a ga - enyere aka iwulite ntụkwasị obi ozugbo nke nwere ike were ọtụtụ afọ iji wuo ya.
Ndụmọdụ 4: Ekwela Ka Usoro Ọdịnaya Gị Na-enwe Ike ọgwụgwụ
Bịakwute isiokwu ọhụrụ bụ nnukwu nsogbu nye ọtụtụ ndị isi echiche, mana ọ bụrụ na ị na-abịaru ya nso site na ọdịmma onwe gị, mgbe ahụ ị ga-akụ mgbidi n'oge na-adịghị anya. Dịka ọmụmaatụ, ndị odeakụkọ, anaghị enwekarị ihe ha ga-ekwu n'ihi na ha na-achọ ihe ọhụụ na-eme n'ime mpaghara ọkachamara ha. Akụkọ ahụ anaghị akwụsị akwụsị. Chee echiche dị ka onye nta akụkọ, dozie nnyocha mgbe niile na-eweta nkọwa ọhụụ na nghọta maka isiokwu 'akụkọ' nke ahụ dị mkpa nye ndị na - ekenye gị.
Ndụmọdụ 5: Eziokwu enweghị ike ịbụ adịgboroja
Na nkenke: gosi ndị na-ege gị ntị na ị nọ na ya maka ogologo oge. Echiche ndu abụghị maka igosi onye ọ bụla otu ị siri ma nwee ọganiihu. Ọ bụghị maka ịdị egwu n'ihi ya. Iche echiche bụ maka igosipụta nka na igosi na ịnọ gburugburu idozi nsogbu taa na n'ọdịnihu. Gbaa mbọ hụ na isiokwu ọdịnaya gị, ụda olu na akara data bụ eziokwu ma gosipụta ihe ị kwụrụ.
N'oge nke nkwukọrịta multichannel, ọ dịtụbeghị mkpa karịa ịzụlite usoro iduzi echiche nke ziri ezi na ụlọ ọrụ gị, na-agbakwunye ndị ahịa uru ma belata mkpọtụ ahụ. 2021 nwere ike ịbụ afọ gị ịrị elu ma nụ.
Tags: eziokwuike ọgwụgwụ ọdịnayankwukọrịta dijitalụLeadershipomnichannelochichi echicheọhụụ
Gurpreet Purewal bu onye osote onye isi oche nke Development Business na iResearch, onye okacha amara ndi ochichi ndi ndu.